Beesha Sade oo caddeysay mowqifka ay ka qabto mooshinka Xasan Sheekh - Caasimada Online
Home Warar Beesha Sade oo caddeysay mowqifka ay ka qabto mooshinka Xasan Sheekh
Beesha Sade oo caddeysay mowqifka ay ka qabto mooshinka Xasan Sheekh
Cabud-waaq (Caasimada Online) – Ayada oo maalmo ka hor koox xildhibaano ah oo garaya 100 ay keeneen mooshin ka dhan ah Madaxweynaha Somalia Mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayaa waxaa soo baxaya dareemo kala duwan oo laga muujiyay mooshinkaasi.
Beesha Sade oo ka mid ah Beelaha ugu sameynta badan Somalia aya mooshinkaasi shaki badan ka muujisay waxaayna ku sheegtay mid lagu doonayo in lagu burburiyo hay’adaha kooban ee maanta qaranka Somalia u dhisan.
Suldan Axmed Garbacune oo ka mid ah Suladiinta Beesha Sade oo asago ku sugan magaalada Cabudwaaq warbaahinta la hadlayay, ayaa waxaa uu sheegay in mooshinka laga keenay Xasan Sheikh Maxamuud u yahay mid lagu burburinayo qaranka Somalia, islamarkaana beesha Sade ay ka siman tahay inaysan marnaba taageerin.
1 – Suldanka waxaa uu sheegay in Qaybta kowaad ay tahay xildoon waxana ay rabaan ayu yiri in ay jagada kala wareegan Madaxweyne Xasan Sheikh ama Dowlada saami loga ogolado.
2 – Qaybta labaad ayuu suldaanka ku sheegay in ay yihiin qayb rabta in loo fuliyo dano siyaasadeed oo ay wataan sida in lo aqoonsado maamul goboleed iyo arimo kale oo badan.
3 – Suldaanka ayaa qaybta sadexaad ku sheegay kuwa ugu liita waxaana uu sheegay in kuwaasi waxa socda aysan ka warqabin ee ay hoolka qado u soo raadsadeen iyo shilimaad jeebka logu shubo.
Ugu danbeyn Suldaanka ayaa waxaa uu ugu baqay in shacabka Somaliyeed in ay meel uga soo wada jeestaan wax alaale iyo wixii wax u dhimi kara hay,adaha qaranka ee hada dhisan.